Izithombe zevidiyo ezikhombisa amaphoyisa edubula kumbhikisho wase-Wits | Scrolla Izindaba
Izithombe zevidiyo ezikhombisa amaphoyisa edubula kumbhikisho wase-Wits
Kuvele izithombe ezethusayo zesenzo samaphoyisa endaweni yesigameko sokudubulana embhikishweni wase-Braamfontein ngoLwesithathu.
Owesilisa oneminyaka engama-35 – okutholakale ukuthi uMthokozisi Ntumba – ushonile.
Njengoba kubikwe ngabakwa-Scrolla.Africa ukuthi, uNtumba ubesanda kuphuma emtholamphilo ukuyobona udokotela wakhe, kodwa wagcina emigwaqeni yase-Braamfontein ngesikhathi kubhikisha abafundi ebebebhikishela ukukhishwa kwabafundi abakweleta imali eNyuvesi yase-Witwatersrand.
Izitshudeni zilimele, kodwa uNtumba nguyena kuphela obulewe.
UNtumba ubesebenza eMnyangweni wezokuHlaliswa kwaBantu futhi ubesanda kuqeda iziqu ze-Masters. Ubengubaba oshadile wezingane ezine, ingane yakhe encane inezinyanga eziyisishiyagalombili kuphela ubudala.
Le vidiyo kubukeka sengathi ithathwe yikhamera yezokuphepha, futhi ikhombisa ingxenye yomgwaqo lapho okuhamba khona abantu, izimoto ezimile kanye nomgwaqo ovuleke ngokwanele ukubona imoto yamaphoyisa ebizwa nge-Nyala iqhamuka.
Kulevidiyo, abafundi babonakala bezungeza emgwaqeni, bese beyahlakazeka uma sekuqhamuka imoto yamaphoyisa. Amaphoyisa amabili agxumela ngaphandle abonakala edubula ngezibhamu.
Phezu kohlaka, kubonakala iphoyisa limile lidubula isibhamu sibheke ngasesitolo. Ubonakala edubula kabili, ngemuva kwemoto emnyama ebimile, abuye anyakaze athi ukuhambahamba aphinde adubule futhi. Isibhamu sakhe sibonakala siphuma intuthu encane ngezansi (amasekhondi ayi-18).
Elinye iphoyisa libonakala liqonde kubafundi abebezama ukubaleka bese lidubula isibhamu (imizuzwana eyi-13), okukhombisa intuthu yomlilo esithombeni esingezansi.